Pro ကိုမီတာအားသွင်းအမ်ပီယာ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » အမ်ပီယာမီတာ Pro ကိုအားသွင်း
မီတာ Pro ကို APK ကိုအားသွင်းအမ်ပီယာ
သငျသညျလက်ရှိဘက်ထရီပြည်နယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း app တစ်ခုရှာဖွေနေပါသလား? သင်သည်သင်၏ဘက်ထရီကြာရှည်ဦးမည်မည်မျှအချိန်ပတ်သတ်ပြီးအတွက်အကြောင်းကြားခံရဖို့လိုသလား? သင်သည်သင်၏ RAM ကိုအသုံးပြုမှုနထေိုငျမြင်ချင်ပါသလား? တိုက်ရိုက်အားသွင်းသင့်ဘက်ထရီဗို့အားနှင့်အပူချိန်ကအသုံးပြုလက်ရှိဘက်ထရီအဆင့်နှင့်အဆင့်အတန်းကို, ဘက်ထရီကနျြးမာရေး, နည်းပညာနှင့်တူပစ္စည်းပစ္စယရှုမြင်နိုင်သောအပေါငျးတို့သနှင့်ဤမျှလောက် more.With အမ်ပီယာ Pro ကိုမီတာအားသွင်းလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုသောအဆုံးစွန်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ သင်အမှန်တကယ်လုံခြုံပြီးရှည်လျားကာလအတွက်စနစ်တကျလည်ပတ်နေသင့်ရဲ့ဘက်ထရီကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုလျှင်တိုက်ရိုက်အားသွင်းတပ်ဆင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသော App ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာကို Samsung က Galaxy, LG Nexus HTC, Sony နဲ့အခွားသူမြားစှာအပါအဝင်ဖုန်းများအမျိုးအစားအားလုံးကိုအတူအလုပ်လုပ်တယ်, နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်က Android ကို run သကဲ့သို့သင်တို့ကို install နှင့်မည်သည့်လုပ်ရတဲ့မပါဘဲရုံဒဏ်ငွေအားသွင်းတိုက်ရိုက် သုံးစွဲ. ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
တိုက်ရိုက်အားသွင်းလည်းမဆိုလျှောက်လွှာ၏ထိပ်ပေါ်တွင်ပေါ်လာနိုင်မယ့် Pop-up window ရှိပြီးအားလုံးအချိန်များတွင်လက်ရှိဘက်ထရီပြည်နယ်ကိုရည်ညွှန်းပြသရာ။ လိုအပ်တဲ့အခါသင်ကပင်အသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိ!
သင်သည်သင်၏ဘက်ထရီ၏ဘဝအသက်တာရှည်နှင့်အချိန်တစ်ပိုရှည်ကာလအတွက်စနစ်တကျအဖြစ် running ကသိမ်းထားချင်လျှင်, တှနျ့ဆုတျမအခုအချိန်မှာအားသွင်းတိုက်ရိုက် download လုပ်ပါ!
- သင်သည်အခြား app တွေ run သောအခါတွင်ပင် Floating Pop-up windows ဘက်ထရီပြည်နယ်ကိုပြသ
- အားလုံးလူကြိုက်များတဲ့ Android ဖုန်းကြောင့်အတူအလုပ်လုပ်
- လက်ရှိ RAM ပမာဏသုံးစွဲမှု
အမ်ပီယာမီတာ Pro ကိုအားသွင်း
3.50 ကို MB